▷ Tefal Actifry Express cunto fudud ▷ Fikradaha iyo Qiimaha ugu Fiican 2022
Soo dhawoow, maanta waxaan falanqeyneynaa mid kale oo ka mid ah kuwa ugu fiican Fryers Saliid la'aan ah Mid ka mid ah noocyada ugu iibinta badan, Tefal. Gaar ahaan, waxaan dooneynaa inaan aragno qaabka FZ761015, mid ka mid ah kuwa loogu doonista badan yahay buug-yaraha shirkadda.
Habkani wuxuu horey u lahaa dhowr sano ka dib, inkasta oo dhawaan loo cusbooneysiiyay qaab tiknoolijiyadeed, maadaama uu yahay qalab la raacayo. wax badan iibinaya, marka wax fiican waa in ay haystaan ​​isticmaalayaashu si ay ugu doortaan jikadahooda.
Haddii aadan weli dooran shiilan caafimaad leh oo aad ku kariso saliid yar, ha seegin qalabkan yar, waxaa laga yaabaa inay tahay waxaad raadineyso.
Intaa waxaa dheer in la falanqeeyo sifadeeda, faa'iidooyinka iyo khasaaraha iyo Faallooyinka Macaamiisha, waxaan ku tusineynaa isbarbardhigga kuwa ay xafiiltamaan. Waxba ha seegin!
Eeg Qiimaha FZ761015
➤ Astaamaha Muuqda ee Actifry Express Cunno fudud
Ma rabtaa inaad ogaato waxa kale ee moodelkan bixiyo? Soo ogow Faahfaahinta oo dhan Cuntada fudud ee Express Fryer.
▷ Naqshad iyo dhismo
Fryer-kan Tefal Hot Air Fryer wuxuu leeyahay nashqad wareegsan oo midabka cad uu u badan yahay. Waxay leedahay dabool sare oo go'an oo daaqadi ka taagan tahay taas aan aragno cuntada inta ay karinayaan. Waxay ka samaysan tahay dibadda caag ah taabasho qabow amniga lagu daro.
Cabbirkoodu waa 390x386x260 mm
Miisaanka 5,2 Kilo.
▷ Awoodda Fryer
Qaabkan Tefal waxa uu leeyahay awood wanaagsan waxaana laga yaabaa in uu ku filnaado qoysaska badankooda. Cuntada Fryer FZ761015 waxaad ku karsan kartaa ilaa 1,2 kiilo, taas oo macnaheedu yahay inaad awoodi doonto inaad samayso cuntooyin kugu filan afar ama shan qof.
Haddii aad leedahay qoys ballaaran ama aad jeceshahay inaad u diyaariso diyaafadaha qadeeyayaasha badan, maaha tan ugu habboon.
Fryer-kan waxa uu ku daraa iska caabin 1400W awoodda ugu badan. Waa qiimo dhexdhexaad ah, waana in ku filan in la helo natiijooyin cunto karinta oo wanaagsan.
Awooda Tefal Actifry Express waxa lagu maamuli karaa kontoroolka elegtarooniga ah ilaa a 180 darajo ugu badnaan
Fryer-kan caafimaad qaba ee ka socda Tefal waxa uu ku darayaa saacada dhijitaalka ah iyo joogsi toos ah. Laga soo bilaabo saacadeeyaha waxaan dooran karnaa waqtiga la rabo ama mid ka mid ah saddex barnaamij in la heli karo
▷ Tignoolajiyada ACTIFRY EXPRESS ee rukhsadda leh
Mid ka mid ah faa'iido darrada hawo kulul oo badan ayaa ah in ay xoogaa gaabis yihiin oo ay tahay in aad cuntada ku dhex walaaqdo cunto karinta dhexdeeda.
Shirkaddu waxay xal u raadinaysay mashaakilaadkaas iyadoo adeegsanaysa tignoolajiyadeeda gaarka ah. Si loo dedejiyo wakhtiyada karinta, isticmaal kululaynta garaaca wadnaha hawo kulul.
Si aan taas uga fogaano waa inaan walaaqnaa cuntada, ku darso suufka isku dhafka tooska ah, kaas oo la shaqeeya cuntada la geliyo baaquligeeda dhoobada.
▷ Nidaamka Nadiifinta
Si loo fududeeyo nadiifinta, qaabka cunnada fudud ee cad waxaa lagu qalabeeyay dabool laga saari karo, baaquli iyo qaaddo kaas waxaad ku dhaqi kartaa weelka weelka. Waxaa hubaal ah in ay tahay muuqaal ina badbaadiya wakhtiga iyo shaqada karinta ka dib.
Sidoo kale, sida shiilanyada kale ee aan saliidda lahayn waanu iska ilaalinaa is tufid iyo ur ka yar ayaa la sii daayaa marka loo eego moodooyinka caadiga ah.
▷ Agabka cunto fudud iyo boqollaal cunto fudud
Habkani waxaa ka mid ah qalabka fudud ee fudud, sida magaceedu tilmaamayo, ku habboon kari cuntooyinka ugu jilicsan, sida croquettes ama ulaha kalluunka.
Tefal waxa ay doonaysaa in aad u isticmaasho Fryer-ka Korontada wax ka badan in aad ku shiilo baradho saliid yar, taasina waa sababta ay ku siinayso buug iyo boqolaal cuntooyin online ah kalluunka, hilibka, khudaarta, iwm..
Qiimaha cuntada fudud ee Tefal actifry FZ761015
Haddii aan marka hore wax dhihi karno, waa in tefal actifry express uusan guuleysan sababtoo ah waa kan ugu jaban suuqa, maadaama qiimaha lagu taliyey uu yahay ku dhawaad ​​​​220 euro.
Si kastaba ha ahaatee, hadda qiimuhu inta badan si qoto dheer ayaa loo dhimay, ilaa 60%! Kaliya waa inaad gujisaa badhanka si aad u hesho eeg qiimaha hadda ugu fiican.
Astaantu waxay ku bixisaa shiilanteeda cuntada dammaanadda ugu yar ee uu sharcigu dhigayo waddankeena, 2 sano.
Fikradeena ayaa ah Saliida Tefal Fryer Free Actifry Express waa nooc ka badan buuxin kara baahiyaha isticmaalayaasha ugu baahida badan. Waa qalab guri isu dheelitiran dhan walba, taas oo ka dhigaysa in ay si fiican u iibiso.
Waa badeecad aad loogu taliyay oo aan ku muujinno suurtagalnimada in la arko cuntada marka la karinayo iyo taas si toos ah ayaa looga saarayaa si loo gaaro cunto karinta isku mid ah iyada oo aan loo baahnayn in la farageliyo.
In ka badan boqolkiiba 80 isticmaalayaasha ayaa u qiimeeyay qaabkan si togan. On Amazon waxa ay helaysaa dhibco ah 4.1 out of 5. Halkan waxaad ku arki kartaa laba ka mid ah markhaatiyaasha iibsada la xaqiijiyay inay isticmaaleen.
"Waxaan horay u haysanay moodelkii hore kanuna waa ka wanaagsan yahay sababtoo ah wuxuu leeyahay saacadda oo damisa. Runtii waa foorno yar-yar oo hawo kulul ah oo u oggolaanaysa in si kale loo kariyo.
"Dhadhankayga waa kan ugu fiican dhammaan sababtoo ah dambiisha sare ee lagu daray, taas oo ku siinaysa fursado badan.
Aad loogu taliyay.
Waxaan is barbar dhigeynaa Fryer-ka kulul ee kan moodooyinka kale ee astaanta iyo la tartamayaasha.
Markaad eegto waxaad ogaan doontaa in moodelkan uu yahay kan ugu habboon baahiyahaaga ama ay jiraan kuwa kale oo ku habboon gurigaaga.
Iibso Tefal Actifry Express Cunto fudud
Laga soo bilaabo halkan waxaad ka iibsan kartaa online moodelkan qiimaha ugu fiican oo ku hel gurigaaga adiga oo wata dhammaan dammaanadaha:
Iibso cunto fudud oo Tefal Express
(Codadka: 7 Celcelis: 4.7)
⭐ Fryer Saliid la'aan ah » ⭐ Tefal » Acifry Express Cunto fudud